40 hanjabaado dil ah oo loo diray gabadha Talyaaniga ah ee la baxday Caa’isha | Xaysimo
Home War 40 hanjabaado dil ah oo loo diray gabadha Talyaaniga ah ee la...
Silvia Romano, oo dhawaan laga sii daayay afduubkii loogu heystay Soomaaliya ayaa caqabado la kulmeysay tan iyo markii ay waddankeeda gaartay qiyaast10 maalmood ka hor, maadaama ay shaacisay inay diinta Islaamka qaadatay.
Ilaa 40 farriin oo hanjabaado ah, oo loo arkay kuwo aad khatar u ah ayaa loo diray gabdhan, oo markii ay muslimtay la baxday magaca Caa’isha, labiskeedana ka dhigtay mid asturan.
Meelaha farriimaha loogu soo diray waxaa ka mid ah bogagga ay ku leedahay baraha bulshada, gaar ahaan Instagram-ka.
Silvia ayaa mar gurigeeda magaalada Milan lagu weeraray quraarad, sida ay sheegeen warbaahinta dalkaas.
Gabdhan oo 24 jir ah ayaa ku dhawaad 2 sano afduub loogu heystay Soomaaliya, kaddib markii ay koox hubeysan ka qafaasheen meel ka mid ah dalka Kenya, oo ay qaab samafalenimo ah uga shaqeyneysay.
Dad ku dhaliilayay diinta Islaamka ee ay qaadatay ayaa sheegay inay “khalad ahayd in laga soo daayo kooxdii afduubka u heysatay”.
Booliska ayaa hadda dadaal ugu jira inay gacanta kusoo dhigaan dadka naceybka u muujinaya haweeneydan da’da yar.
Cid kasta oo lagu helo inay kug lahayd hanjabaadaha loo diray Silvia ayaa loola dhaqmi doonaa qaabka argagixisada, sida ay booliska sheegeen.
Romano ayaa dhawaan boggeeda Facebook-ga ku soo qortay aayado quraan ah, oo loo fahmay inay ugu jawaabeysay dadka naceybka u muujinaya go’aankeeda islaamnimada.
Tallaabadaas ayaa qabsatay hadal-heynta warbaahinta dalka Talyaaniga, kuwaasoo falanqeynayay ujeeddada ay Silvia ka leedahay qoritaanka aayaaha quraanka oo ay ku fasirtay luuqadda Talyaaniga.
Wararka ku saabsan Silvia ayaa indhaha caalamka soo jiitay markii uu garoonka diyaaradaha ee magaalada Rome kusoo dhaweeyay Ra’iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte oo uu sidoo kale wehlinayay wasiirkiisa Arrimaha Dibadda.